Liqaan Chaayinaa Afrikaa gabroomsuuf moo deeggaruuf? - BBC News Afaan Oromoo
Madda suuraa, ANDY WONG/AFP/GETTY IMAGES
Chaayinaan ijaarsa bu'uuraalee misoomaa Afrikaaf liqaa Doolaara Ameerikaa biiliyoona 60 qopheessuu pirezedaanti Shii Shiinping himan.
Pirezedaantichi yeroo Kora Afrikaa Chaayinaa eegalanittidha liqaa kana kan ifoomsan.
Qeeqa qaamolee garaagaraan hariiroo Chaayinaan Afrikaa waliin qabdu ilaalchisee ka'uuf, Shiin hojiilee misoomaa biyyoota Afrikaa deeggaruun isaanii dantaa siyaasaa addaa argachuuf akka hin taanee fi hariirichi fayyadamummaa walqixaa biyyoota lameeniirratti akka hundaa'e himan.
Liqaan biyyoonni Afrikaa hojiilee misoomaa adda addaaf jecha Chaayinaarraa argatan sadarkaa deebisuu hin dandeenyerra gahaa jira jechuun ogeeyyiin qeeqanis hedduudha.
Chaartiiwwan jiruu maatii Chaayinaa agarsiisan shan
Iccitiin gargaarsa Chaayinaa yeroo ifa bahu
Kora kanarratti hirmaachuuf Beejiingitti kan argaman Pireezidantiin Ruwaandaa Pool Kagaameen, dubbii Afrikaan liqaa chaayinaan liqimfamteetti jedhu fudhatama hin qabu jedhan.
Hariiroon Chaayinaa fi Afrikaas fayyadamummaa waliinii irratti kan hundaa'edha jedhan.
Dabalataan hirmaannaa Chaayinaan Afrikaa keessatti qabdu akka biyyattis ta'u gama gahee Afrikaan addunyaa keessatti qabduun olaanaa tahuu himan.
Amma kora kanatti dhimma baanee hariirichi akka itti fufuufi fayyadamummaan keenyas akka dabalu gochuu feena jedhan.
Pireezidantiin Afrikaa Kibbaa Siriil Ramafosaan ammoo ilaalcha sirni koloneeffannaa haaraan Afrikaarratti fe'amaa jira jedhu fudhatama kan hin qabne akka ta'e korri agarsiiftuudha jedhan.
Chaayinaan waggoota 16 bara 2000-2016tti jiru gidduutti biyyoota Afrikaaf liqaa Doolaara Ameerikaa biiliyoona 126 kennitee akka jirtu Inisheetiiviin Qo'annoo Chaayinaa Afrikaa, Yunivarsiitii Joons Hopkiinsi ni hima.
Harki caalaan Maallaqa kanaa ijaarsa riqichootaa, daandiiwwan konkolaataa, buufata doonii fi Isteediyoomiif kan oole yoo ta'u, kaan ammoo hojiilee daran bu'aa hin qabnerra oolera jedhama.
Deeggarsa Chaayinaa biyyoota Afrikaa waggaa waggaan kennitu (2000 - 2016tti), biiliyoonaan
Hanga ammaatti kora Chaayinaa Afrikaarratti hirmaachuuf biyyi jila ishee Beejiingitti hin ergine Iswaatiinii yookaan qara Siwaazilaand jedhamuun beekamtu qofa.
Mootummaan Chaayinaa biyyi hariiroo Taayiwaan waliin qabu, Chaayinaa waliinis hariiroo biroo akka qabaatu hin eeyyamu. Sababni isaas Tayiwaan akka biyyasheetti waan ilaaltuuf.
Yeroo hariiroon Ameerikaa fi biyyoota Afrikaa qabbanaa'aa dhufetti Chaayinaan hariirooshee kallattii hundaan cimsuunshee olaantummaa fudhachuuf akka tahes hayyotni ni barreessu.
Dubartii Chaayinaa Keeniyaatti jireenya haaraa tolfatte
Ameerikaan bulchiinsa Tiraampi jalatti hariiroo biyyota Afrikaa waliin qabdu waan cimsaa jirtu hin fakkaattu.
Chaayinaan rakkoo hariiroo daldalaa Ameerikaa waliin qabdu furuufis akka buufata daldalaa guddaa tokkootti Afrikaa fayyadamti kan jedhanis jiru.
Korri Afrikaa Ameerikaa, xumuraa bulchiinsa Baaraak Obaamaa gara xumuraa jalatti akka gaggeefames ni yaadatama.
Kora Waltahiinsa Chaayinaa - Afriikaa (FOCAC) kanarrtti irratti hirmaachuuf gara Chaayinaa kan imalan, MM Itoophiyaa Dr. Abiy Ahimad fi jilli isaaniis, pireezidantii biyyattii Xi Jinping dabalatee MM Li Kegiang waliin mari'ataniiru.
Chaartiiwwan jiruu fi jireenya maatii Chaayinaa agarsiisan shan
Chaayinaan maaliif liqii baay'ee biyyoota guddataa jiranif kenniti?
Maatiinkoo nama Keenyaa ta'e arganii hin beekan: Dubartii Chaayinaa Keeniyaatti jireenya haaraa tolfatte
Viidiyoo, Qormaata Chaayinaa deebii hinargatiin hafe
2 Ebla 2018
Daamaraa, Masqalli Oromoof maali? Akkamiinis kabajata?
Dhuguma abaaboon keelloo Itoophiyaa keessatti qofa biqilaa?
Abdiisaa Bancaa Jaarraa fi duula maqaa magaalotaa 'sirrii hin taane' jijjiirsisuu
Caffeen Oromiyaa yaa'ii jalqabaa har'a taa'een Obbo Shimallis Abdiisaa Pirezidaantii Oromiyaa gochuun muude
Manni rifeensaa tokko rifeensa moodeelii ‘akka malee’ mureef doolaara 271,000 adabame
Taaliibaan magaala keessatti reeffa namoota fannisuun akeekkachiise
Nyaata ilbiisotarraa tolfamu yeroo dhiyootti gabaa keessatti arguu maltan